Howlgalka Macdanta Florida ayaa Adeegsanaya Buundwheel Dredge illaa Dig Ore
Source: Dib u eegista Qeexitaanka Caalamiga ah
Shirkadda Macdanta ee Xiriirka la leh waxay ka shaqeysaa baaldiga baaldiga ee Green Cove Springs, Florida, koonfurta Jacksonville. Godka loo yaqaan "Rocky Ford" wuxuu qodaa carro macdan sita oo ay ku jiraan maaddooyin, zircon, iyo ilmenayt.
Qulqulka wuxuu isticmaalaa matoor 22-inji ah. Shaqaale gaaraya 108 ayaa socodsiiya qashin qubka, mashiinka qoyan ee ka hooseeya qulqulka, makiinada qallalan ee dhismaha shirkadda, iyo xafiiska. Dredge wuxuu shaqeeyaa seddex sideed saacad-socod maalintii, 363 maalmood sanadkii. Qulqulka qunyar socodku wuxuu si qunyar socod ah ugaga qodaa debaajiga, kaas oo ku yaal beerta geedka midowga ee 'Union Camp'. Dhirtii waa la goostay, oo xaarka sare ayaa la gooyay oo lagu kaydiyey hortooda durdurka. Dheecaan baaruuddu waxay qoddaa ciid madow, waxayna ka tagaysaa lacag caddaan ah oo saafi ah, oo la buuxiyey, lagu daboolay dusha sare laguna beeray cawska.
Goobta macdan qodista ayaa qiyaastii shan mayl u jirta dhismaha xarunta, waddooyinka waddanka, iyada oo loo marayo geedka geedka iyo aagga geedka cad-cad ee lagu arki karo go'doonsan tahay balliga ay nafteeda ka sameysay. Dhererku wuxuu sameeyaa gadaal dambe 1,000 illaa xNUMX cagaha dherer ah, oo uu jiidayo fiilooyinka xargaha.
Qodista bulukeetiga ee bulukeetiga ayaa qodaya qeybta hoose ee bangiga, godka bangiga si ay macdanta ugu qasto. Iyada oo ay ku jirto baaldiga, waxay u qodaysaa 900 illaa 1,200 tan saacaddiiba, taasoo u turjumeysa tan 20,000 tan maalintii iyo toddobo milyan oo tan sanadkii. AMC waxay ka soo iibsatay '500 HP bawdada' Ellicott® Mashiinka Baltimore si loogu beddelo gogo go '1200 HP Rotary cutterhead. Ellicott® qashin-qubka 'bagwoodel dredge' ayaa soo saaraya qoditaankii hore ee in ka badan 2: 1 in kasta oo in ka yar kala badh isticmaalka quwada.
Maaddada waxaa loo tuuray xagga sare ee dhoobada qoyan ee afarta dabaq sare leh ee soo raaca qoditaanka, iyada oo loo sii marayo trommel ka soo qaadaysa xad-dhaafka, ka dib iyada oo loo marayo saddex nooc oo wareegyo ah oo kala soocaya macdanta culus illaa 85 boqolkiiba uruurinta. Macdanta waxaa lagu keydinaa meel u jirta 4,800 fuudh, waxaa lagu shubay tuubo lix-inji ah oo polyetylen ah iyadoo la isticmaalayo seddex bambooyin ah 5X4 ″ Baabuurta xamuulku waxay u rartaan mashiinka qalalan halkaasoo isku darka cuf isjiidadka iyo hababka korantadu ay u kala soocaan macdanta.
Maamulaha hawlgallada kooxdu wuxuu sharraxay in deebaajigu yahay goobta xeebta qadiimiga ah halkaas oo waxsoosarka lagu tuuray meel aad u weyn oo ah webi webiga. Deebaajigu wuxuu u dhexeeyaa hal mayl-shan-mayl illaa hal mayl ballac ah, dhererkiisuna yahay 35 cagood oo ay ku jiraan 100 milyan oo tan oo ore ah. Xeebta hore ee badda ayaa hadda ah 15 mayl gudaha ah.
Suugaanta shirkadu waxay dhigeysaa wax soo saarka sanadlaha ah ee Florida howlgalka 30,000 tan oo aan fiicneyn, 35,000 tan oo zircon ah iyo in kabadan 60,000 tan oo ilmenayt ah, iyo waliba qadar yar oo leucozene, monazite, iyo staurolite ah. Tayada macdanta waa mid aad u saraysa, zirconkuna waa heer nadiif ah oo ku habboon codsiyada dhoobada ee muhiimka ah.
Macdanta la shaqeeya waxay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee ka qoda macdanta ciidda adduunka. Shirkaddu waa qayb ka mid ah RGC Ltd. (Renison Goldfields).
Waxaa lagu daabacay Dib-u-eegista Qodista Caalamiga ah